Wakaalada Wararka Warqaad – Raali Galin : Shabakada Allcaasimada.com oo raali galin ka bixineysa war si qalad ah loogu daabacey.
Raali Galin : Shabakada Allcaasimada.com oo raali galin ka bixineysa war si qalad ah loogu daabacey.
03/15 9:40 pmComments OffViews: Shabakada Allcaasimada.com ayaa shalay oo ay taariikhdu aheyd 14-03-2013 waxay ay daabacdey war ku aadan xil ka qaadis ay sameen rabto xukuumada Soomaaliya.
Shabakada ayaa waxa ay maanta xiriiro badan ay sameesey ku ogaatey in aysan wax xil ka qaadis lagu sameen rabo iyadoo ila wareedaydee horey ay warkaasn uga heshey ay ahaayeen kuwa aan lagu kalsoonaan karin.
Hadaba Shabakada ayaa raali galin buuxda ka bixineysaa Warkaasi iyadoo Maamulka shabakada uu xaqiijin iyo daba gal ka dib raali galin buuxda ka bixinaya.
Tooshka WarqaadMadaxweynaha: Inuu qabto inta ka dhiman howsha ayaan rajaynaynaa TOP: RW cusub “Waxaan muhiimad gaar ah siin doono xasilinta dalka” Daawo: Gabar Somaliyed oo xaadda ku kicinaysa – Qabiil dugsi maleh. XOG: Faroole oo inuu kursiga sii fadhiyo ku dhiibaya qarash badan TOP: Wax ka baro taariikhda ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Taariikh Nololeedka RW cusub ee Somalia C/wali Sheekh Axmed Deg Deg: Amisom oo la wareegtay Amanka Dr Cabdiweli Sh Maxamed Arimaha BulshadaDaawo: Gabar Somaliyed oo xaadda ku kicinaysa – Qabiil dugsi maleh. Arin layaab leh oo ka dhacday munaasabadii magacaabida RW cusub TOP: Wax ka baro taariikhda ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya XOG LA HELAY: Daawo Muuqaalka Ra’iisul wasaaraha cusub oo la helay. Wararkii ugu dambeeyay ee aqalka madaxtooyada iyo RW cusub. TOP: Daawo dowladda Federal-ka oo saxiixday buugga tacsida Mandela Hees cajiib ah oo loo qaaday RW Saacid, Madaxweynaha lagu caayay Gabdhaha isticmaala Facebooka oo la sheegay in abateetka ka xirmo Dhageyso “Jeesow oo ka hadlay halka uu marayo maamulka G.Hiiraan” DAAWO: Faroole oo si aanan caadi ahayn loogu soo dhoweeyay Garoowe visitor activity monitoring
MaqaaloPuntland: Labo Gudi, 2 Barlamaan, 2 Doorasho & 2 Xukumad “Warbixin” Sideed ku Cafin Laheyd Saaxiibtaa ama Saaxiibkaa Qalad kaa Galay? Somaliya Shilinkaa Sharciga Ka Weyn!!!+Faallo Soomaaliya ma soomaali baa leh misa Zamankiyo wuxuu sido? Wasaarada horumarinta & A/Bulshada : Hogaanka Wasaaradaha Soomaaliya. Dilalka Madaxda Al Shabaab yaa ka dambeeya? Culeys dhig ee mid kale Qaad waa cilad heysata dowlada Soomaaliya. Puntland kana siib kana saar ( Riwaayad taxane ah Qaybtii 1-aad ) Madaxweyne Xasan oo hadal qiiro leh U Sheegey Shacabka Jubooyinka Fanaanad Soomaaliyeed oo ka Tilaab satay Dhaqankena Wanagsan + Sawiro Halkee Ku Tababarteen Kooxdii ka danbeeysay Weerarkii Westgate Sheeko gaaban oo Shakiga iyo isku dirka Soomaalida ka hadleysa UNICEF oo barnaamij wada sheekeysi ah u furtay gabdho Soomaaliyeed oo da’yar #22306 (no title)Nagala Soo Xariirtaleex banaabaxgacan iyo lug go’andhalinmuuqaalSoomaalilayaabka baaluunkaDaawo Muuqaalka xayawaan dagaalamaya iyo kumanaan dad ah oo daawanayaAxmed MadoobeGaafowQARAXDaawo Video : Hodan C/raxman oo Qurbo joogta Muqdisho hees cajiib ah ku ceebeysay!!!Shaaribaha iyo BakistankufsikubadTarsanSaado-CaliFAYSAL-WARAABE-DHEGAYSOBEEGSIGASh UmulProf ToganeCali Maxamed GeedifoolkaanomudaaharaadthanksgivingXasuuqBAARLAMAANKAgooltuugAbu MuscabmuuqaalGUBASHOMuuqaal: Qarixii maanta ee halakeeyay BoosaasogabarMandellarugcadaa dagaalUMALmuuqaalMusharax Muuse Sh Cumarma dhabaa?BeebayaalbaraaticMUUQAALFaroole-Shirka Maanta